Gentoo Linux Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ | Site na Linux
Gentoo Linux Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Linux Gentoo bụ Linux nkesa gbadoro anya ndị ọrụ na ụfọdụ ahụmahụ ma ji ya customization na ọsọN'isiokwu a, anyị na-ekekọrịta nkuzi nkuzi maka ntinye ya na nhazi ya.
Nke a bụ onyinye sitere na Tete Plaza, wee bụrụ otu n'ime ndị mmeri nke asọmpi kwa izu anyị:Kesaa ihe ị maara banyere Linux«. Ekele Tete!
Nke mbu, achoro m ikwuputa na ihe obula mmadu choro di na Gentoo Wiki, ma obu na Arch Wiki, ajuju ndi ozo banyere ha di na akwukwo ndi mmadu. M na-eme nkuzi a n'ihi na ọtụtụ mmadụ arịọla m maka ya, yana maka na m ga-etinye granite m na-ahazi mgbe m na-etinye Gentoo.
Mara na ndị na-agụ agụ nwere nnukwu ekele na distro a. Ee, ọ bụ distro ebe enwere ike idozi ọtụtụ nsogbu site na ị gụrụ wiki ma mee obere nyocha (ya bụ, ọ bụrụ na ị jụọ ihe ha zaa "lelee wiki ahụ"), ọ pụtara na dịka onye ọrụ Gentoo ị naghị eme ihe ọfụma xD). Nke a apụtaghị na azịza "dị mfe" anaghị aza, mana nnukwu akwụkwọ na-egosi na mmadụ gụrụ iji dozie nsogbu ha.
Ugbu a, m ga-ekwu okwu, na strok sara mbara, ihe Gentoo bụ, ihe dị egwu banyere ya, na ihe na - eme ka ọ dị iche na Linux distros ndị ọzọ. Anyị ga-eche na Gentoo bụ koodu ntinye dabere distro. Kedu ihe nke a pụtara? Na adịghị ka ot distros (precompiled) dị ka Debian, Ubuntu, njiko, Manjaro, Fedora, SUSE, na a ogologo wdg; Mgbe ị na-etinye ngwugwu, ọ naghị ebudata ihe ndị a ga-eme (ọnụọgụ abụọ, .deb, .rpm, .pkg.tar.xz, wdg) ma wụnye ya, kama ọ na-ebudata koodu iyi ya, na-achịkọta ya dịka onye nhazi anyị na iwu anyị nwere. akọwapụtara maka nchịkọta, na nke a site na executable, nke wee wụnye.
Uru nke Gentoo
Ihe mere Gentoo ka ọ bụrụ distro pụrụ iche abụghị naanị na ọ na-achịkọta ngwugwu, kamakwa na mmadụ na-ekpebi nkwado maka ihe ndị ngwugwu ọ bụla ga-enwe. The kpọmkwem pụta nke customizing na chikota na
nchịkọta, bụ ọsọ. N'ihi gịnị? Ka anyị jiri ihe atụ gosi ya.
N'ịbụ X a precompiled distro (nke m kwuru n'elu), nke mere na enwere ike itinye X distro na ụdị igwe dị iche iche, ọ dị mkpa na a ga-agbakọta ngwugwu ya na usoro ntuziaka nke igwe okenye. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ha si na Pentium II gaa n'ihu, anyị ga-achịkọta ngwugwu ha niile na usoro Pentium II.
Olee nsogbu nke a na-eweta? Na na ndị nhazi ọhụrụ, were ya na i7, nchịkọta ndị ahụ agaghị eji ikike niile nke nke ikpeazụ na-enye, ebe ọ bụrụ na ha jikọtara na ntuziaka ntuziaka nke i7 nyere, enweghị ike igbu ha na ndị nhazi tupu nke a, n'ihi na nke ikpeazụ enweghị ntuziaka ndị a.
Gentoo, site na nbudata koodu isi ma chịkọta ya maka processor ị nwere, ga-eji ikike ya zuru oke, ebe ọ bụrụ na ị wụnye ya na i7, ọ ga-eji usoro ntụziaka nke a, ma ọ bụrụ na ị wụnye ya na Pentium II, ọ ga-eji kwekọrọ na nke ikpeazụ.
N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ịhazi ụdị nkwado ịchọrọ ka nchịkọta ga-enwe. M na-eji KDE na Qt, yabụ enweghị m mmasị na nchịkọta nwere nkwado GNOME na GTK, yabụ ana m agwa gị ka ị chịkọta ha na-enweghị nkwado maka ha. N'ụzọ dị otú a, mgbe ị na-atụnyere otu ngwugwu na Gentoo na distro X, ngwugwu Gentoo na-adị mfe karị. Ma ebe ọ bụ na distro X nchịkọta ndị ahụ bụ ihe ọmụmụ, ha ga-enwe nkwado maka ihe niile.
Ugbu a, mgbe m gosipụtara okwu mmeghe, ana m ahapụrụ gị njikọ nke faịlụ nhazi m nke soro PDF ndu m mere maka otu esi etinye Gentoo na Linux Live CD (Ubuntu, Fedora, SUSE, Backtrack, Slax, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ha) ma ọ bụ site na nkebi nke ha tinye Linux distro.
Budata nkuzi nkuzi Gentoo Budata ntọala m
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Gentoo Linux Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Juan Manuel Lopez ebe obibi oyiyi dijo
Onwere onye maara ka esi etinye nvidia ọkwọ ụgbọala nwere teknụzụ optimus na akwụkwọ asus n61jv? Enweghị m ike ịnweta kaadị vidiyo iji rụọ ọrụ… naanị iji intel kaadị ọ na-eri batrị….
Zaghachi Juan Manuel Lopez
wow m na-acho ihe dika nke a, abum onye na acho windo mana distro a jidere m, enwere m olile anya na m gha ejide ya nke oma
Odi nma !!! Ingwụnye Gentoo na akụkụ nke iji CHROOT m tụfuru njehie n'ihi ụlọ (n'echiche m) nke CD dị ndụ m na-eji na nke m budatara hahaha.
Ya mere ịmalitegharị nwụnye ọzọ, mgbe obere oge gasịrị, ana m agwa gị otu o si gaa>.
Ntuziaka a ka dị ugbu a
I meela nke ukwuu, ana m eso nkuzi ahụ, agbalịrị m ọtụtụ oge iji wụnye gentoo, mana m na-akwụsị mgbe niile, anyị ga-ahụ ma m ga-aga nke ọma n'oge a.
Enyi m na-agbali ibudata na peeji nke gọọmentị (echere m): https://www.gentoo.org/downloads/
Ajụjụ a bụ nke m na-ebudata na ihe dị iche na otu na nke ọzọ, na-abịa obere nwụnye CD, Hybrid ISO na Stage 3 ... Adị m ọhụrụ na nke a, m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị kọwaa ma ọ bụ nye m njikọ na ama ahụ.
LibreOffice 4.0 ga-emeziwanye n’ọdịdị na arụmọrụ